Pane here mazano ekuita uye maAmerica ekugadzirisa mazano ekugadzirisa?
Zvakafanana nehukuru hunotsvaga hutsvene hunoshandiswa neGoogle, chigadzirwa chinotengeswa kuAmazon ine zvinyorwa zvayo zvinogadzirisa chigadziro chinzvimbo chezvinhu zvose zvakanyorwa pane zvekutengesa pamusoro apo. Maererano nebasa guru reAmerica rekodzero yemitemo, vatengesi vose vanogona kuona kukurudzirwa kwepamusoro kwehuwandu hwemaonero ehuwandu hwezvakagadzirwa peji - kungowedzera imwe imwe nguva yekutsvaga. Zvechokwadi, zvakapiwa kuti izwi iri rekutsvaga rakanyatsonaka, rinofanira uye rinomanikidzira. Pakati pezvimwe zvikonzero zvinogadzirisa zvese zvinoshandiswa pakutsvaga panzvimbo yepamusika, pane zvimwe zvakawanda zvezvinhu, zvakadai semutengo wemiti, kuwanikwa, mutengesi wenhau, nezvimwewo. chinhu chokutanga chinowanikwa nevose vanocheka vachigadzira ipapo. Saka, ndeipi inonyanya kukosha maAmerica zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa kuti uwedzere matanho ako uye kukunda kukwikwidza kwemukati-yepamusoro kutonga pamusoro pezvikwereti izvi zvakawanda? Ngationei - grain storage wiltshire.
Amazon Product Description uye Gwaro Rekugadzirisa Mazano Tier
One: Isa Up Product Listing Right Way
Zvakanaka, inofanira kunyatsoratidzira zvose zvinotsigira dambudziko maererano nechigadzirwa. Uye iyi data inofanirwa kuva iyo chaiyo iyo yako "yakanaka" mutengi anoda kuona uye anoda kuziva kuti agadzirise kutenga newe. Mune mamwe mazwi, zvose zvaunoda ndeyekuti vashanyi vako vose vazive chaizvo zvavanenge vachatora kubva muchitoro chako.
Pano pane zvikamu zvekutanga zvechigadzirwa chinoita zvakanaka:
Mutengo weChito unofanira kuva wakasiyana, wakananga, uye unopindirana nemaonero eAngland anowanzogamuchirwa mazita.
Nyaya yeB Bullets inokurudzirwa kusanganisira kwete zvinopfuura zvishanu zvinyanya kukosha, zvichingovhara dambudziko guru rekusimbisa pamusoro pechinhu chiri kutengeswa.
Tsanangudzo Dzakagadzirwa Zvine maitiro makuru chete, zvikomborero, uye zvigadzirwa zvemiti.
Bvisa Mufananidzo weMifananidzo yakagadzirirwa kuratidzira chaicho icho mupfuri achakuwana newe.
Tier Two: Chimbofunga Basic Amazon Mirayiridzo yeGwaro Rekushandisa
Pane chimwe chinhu, funga mupfungwa kuti pane 200 mutezo wemutsetse wakagamuchirwa Amazon kusvika kusvika munaJuly 2015. Ndicho chikonzero kana uchitanga kuburikidza nezano rinotevera rinobatsira kugadzirisa musoro rinoita kuti uchengetedze humwe mutengo wechikwata uri pasi apa. Kana zvisina kudaro, mugove weshumba wevatengi uchange uine zvingangoita zero kukuwana iwe pane tsvakurudzo yeAmerica. Saka, pano ndizvo zvinofanira kuitwa kuti uve nemiti yakanaka yekutengeserana inotengesa:
Zita rimwe nerimwe rinotanga kufanirwa kuverengwa.
Mashoko ose ekuenzanisa (kufanana inch, Ounce, Pound, etc.) anofanira kunyorwa.
Nenzira imwecheteyo, nhamba dzose dzinofanira kuuya senhamba.
Zviratidzo zve amp ampandand (kureva "&") zvinorambidzwa.
Ruvara / ruzivo harubvumirwiwo (kunze kwekuti iine chokwadi chakakosha).
Usambofa uchitaura chero dheta yekutengesa, kutumira, kukurudzira, kana chero humwe ruzivo rwemashoko.
Zviratidzo zvakadai se "$," "!" Uye "?" Hazvibvumirwi zvakare.